Nidaam midabbo kala duwan leh oo leh giraanta koromatorada leh | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Waraaqaha midabaynta
Marka la eego taariikhda shineemada, khibrada laga helay dhanka madadaalada shaashadda weyn waa badan tahay waana taas midabku wuxuu bixiyaa hagaajin fiican oo xaqiiqda ah.
Adduunku wuxuu ku jiraa midabbo iyo xorriyad ballaadhan oo loogu talagalay ciyaarta hal-abuurka ah, wuxuu ku siinayaa nolosha intaas in ka badan wuxuu ka dhigayaa qofka daawada inuu dareemayo farxad waana in la xusuusnaado, maadaama ay u muuqato mid khuseysa in sidoo kale dib loogu noqdo filimka, macno ahaan, filim sameeyayaal madow iyo cadaan ahSi kastaba ha noqotee, waxay gaareen heerar aad u sarreeya oo kaamil ah sawir qaadista, farqiga u dhexeeya iftiinka iyo hooska iyo xirfad la yaab leh oo ku saabsan isticmaalka nalka.
1 Midabka loo adeegsaday shaleemada: Mid waliba hawl buu leeyahay
2 Noocyada midabbada iyo isku-darka xaaladaha kala duwan
2.1 Isku-darka midabada saddex geesoodka ah
2.2 Nidaamka midabka Monochrome
2.3 Isku-darka midabka analog
Midabka loo adeegsaday shaleemada: Mid waliba hawl buu leeyahay
Midabku waa cunsur muhiim u ah luqadda shineemada, waana taas midab la aan ma jiro shineemo.
Midabku wuxuu oggol yahay laydh tanina waxay abuurtaa hooska, laalaabku, dib u cusbooneysiinta ama da'ha, waxay abuurtaa saamayn nafsi ah oo dabeecadda ah, iyadoo ku xidhan hadba meesha la dhigo, jawiga filimku wuu isbeddelayaa. Shineemo madow iyo cadaan ah, filim sameeyayaasha qaar ayaa jecel Eisenstein ama Fritz Lang Waxay ku guuleysteen inay xukumaan adduunka midabka iyo hooska, iyagoo siinaya hooska dabeecad hoggaamineed, si heer sare ah u adeegsanaya nalka dambe, qiiqa dabka iyo sigaarka.
Cowska iyo saameynta kale waxaa loo sameeyay ujeedooyin bilic leh, si xoogga loo saaro iftiinka oo aan loo abuurin oo keliya jawiga iyo jawiga.
ka midabada cálidos waxay bixisaa aragtiónambarka dhawaanshaha kuwa qabowna meel fog. Qiimaha xoojinta midabka midab waliba wuu saameeyaa waana in qiimaha sare, ee iftiimay soo jeedinayaa weynaan, fogaansho, madhan.
Taa bedelkeeda, qiime hooseeya, iftiin yar ayaa soo jeedinaya qiyaas ahaan. Dhanka kale, la iftiimiyay oo soo jeeda iftiinku wuxuu xoojinayaa midabadaWaxay siinayaan jawi farxad walxahana waa ka muhiimsan yihiin guud ahaan. Ugu dambeyntiina, asalka mugdiga ayaa daciifiya midabada, ka murugoonaya walxaha cilladoobay oo lumiya muhiimadda guud ahaan.
Midabku wuxuu u adeegaa inuu diirada saaro feejignaanta, kor u qaado laxanka sheekada iyo isdhaafka, iyo muujinta daqiiqadaha qaarkood si aad u xoog badan.
Noocyada midabbada iyo isku-darka xaaladaha kala duwan
Isku-darka midabada saddex geesoodka ah
Isku darkaani wuxuu caan ku yahay shaleemada, isagoo ah is biirsaday aad u layaab badan oo leh kala duwanaansho ku darista midab saddexaad oo keenaya wada noolaansho.
Haysashada xoog weyn ayay yihiin más loo isticmaalo pelídameeraha superhéroes ama animationón, taas oo midabyo firfircoon ay ka muuqdaan oo soo jiidanaya dareenka taasna aan laga gaarin. Qaar ka mid ah midabadaas firfircoon ee la isticmaalay waa casaan, jaalle, oranji iyo cagaar. Ujeeddadu had iyo jeer waxay noqon doontaa inaad aragto iyaga iyo in dabeecaddaadu u egtahay mid dhammaystiran.
Nidaamka midabka Monochrome
Isku dhafkan ayaa ah isticmaalay más fiican ee goobaha gaarka ah marka loo eego dhammaan filimka, maaddaama ay ka kooban tahay siinta isla afka oo dhan goobta oo dhan, si ay u matalaan dareen gaar ah. Fikradda ugu muhiimsan ayaa ah inaadan aad uga jeedin dareenkaaga goobta si aad ugu fiirsato waxa ugu badan ee taagan taasna waa in fikradda ay tahay inaadan wax badan ka baarin hareerahaaga maxaa yeelay wax waliba waxay u egyihiin isku mid
Isku-darka midabka analog
Dareenka la raadinayo waa aqoonsi buuxa oo goobta ah, oo leh jilaa iyo daawade.
Erayada cad, marka jilaaga weyn dhaawacmay, midabada muujiya musiibada, tusaale ahaan, waxaa laguqasban yahay qaab wax walboo umuuqda mid ka hooseeya, murugo iyo carrab la '. Marka lagu daro midab weyn, waxaa jira laba omás midabada ku dhow kaas oo isku awood ah.
Sababtaas awgeed, waxaa jira filimo u adeegsada muuqaallo gaar ah oo loola jeedo isbedelka muujintaón iyo kuwa kale ee sameeya filimka oo dhan oo haddii aad xaqiijiso dhacdadan, naftaada hesho xoogaa lacag ah oo aad iibsato cabsi ama filimaan animation, kuwani waa kuwa kuugu fiican inaad ogaato isbeddelada chromátikoos.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Waraaqaha midabaynta » Isku dhafan midab kala duwan oo leh giraanta chromatic
12 aragtiyo kala duwan oo ku saabsan naqshadeynta garaafka